Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ka sameeyay Baladweyne iyo Wafdi DKMG ah oo gaaray – SBC
Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ka sameeyay Baladweyne iyo Wafdi DKMG ah oo gaaray
Posted by Webmaster on January 22, 2012 Comments
Ciidamada Dowlada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa lashegay in howlgalo ay saaka halkaasi ka sameeyeen ay dad ku qaqabteen.
Saaka Arooryadii hore howlgalo balaaran oo ay ciidamada Itoobiya ugu dhaqaaqeen qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha Magaaladaasi ayaa sida la xaqiijinayo waxay ku qabqabteen dad ay ugaga shakiyeen in ay amaan xumi ka wadeen halkaasi.
Lama xaqiijin karo ilaa iyo iminka inta qof ee ay qabqabteen balse warar madaxbanaan ayaa sheegaya in dadka la qabqabtay ay ula dhaqaaqeen dhanka saldhigyadooda ay ku leeyihiin magaalada.
Howlgalada ayaa saameyn xoogleh waxay ku yeesheen dhaqdhaqaaqa kala gedisan ee dadweynaha iyo ganacsiga inkastoo xiliyadii dambe ay dib u soo laabteen.
sida la rumeysanyahay howlgalada ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida ay ka fuliyeen Baladweyne waxaa ay u gogol xaarayeen wafdi maanta halkaasi gaaray oo ka socda Dowlada KMG ah ee Soomaaliya islamarkaana uu horkacyo wasiirka Qorsheenta iyo xiriirka caalamiga ah.
Majiraan warar faah faahsan oo ku aadan safarka iyo kulamadii halkaasi uu kula qaatay qeybaha kala duwan ee Bulshada sida Odayaasha iyo waxgaradka gobolka, balse warar lagu kalsoonaankaro ayaa sheegaya in wafdigani uu halkaasi u gaaray arimo ku aadan sidii uu ugu gogol xaarilahaa maamul loo dhanyahay oo halkaasi ka hirgala.
C/casiis Axmed Ibraahim